Lahatsoratra nataon'i Yael Zlatin momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Yael Zlatin
Yael dia talen'ny e-varotra Adtaxi. Nandritra ny taona maro dia nahitana fahombiazana tamin'ny fananganana funnels niova fo mahomby ary mpitarika sy mpanoro hevitra miandalana amin'ny fampianarana, mitarika ary mandrisika ny ekipa anatiny sy virtoaly.
Alatsinainy, Novambra 25, 2019 Alatsinainy, Novambra 25, 2019 Yael Zlatin
Tonga eto amin'ny fomba ofisialy ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra ary manangana azy io ho iray amin'ireo lehibe indrindra amin'ny firaketana. Miaraka amin'ny faminanian'ny eMarketer ny fandaniana e-varotra antsinjarany hihoatra ny $ 142 miliara amin'ity vanim-potoana ity, dia misy be dia be ny fivezivezena, na dia ho an'ireo mpivarotra kely kokoa aza. Ny tetika hijanonana ho mpifaninana dia ny hakingan-tsaina momba ny fiomanana. Raha ny tokony ho izy dia efa nanomboka an'ity dingana ity ianao, amin'ny fampiasana ireo volana vitsivitsy lasa izay handaminana ny fampielezan-kevitrao ary hananganana lisitra marika sy mpanatrika.